Ungayifumana njani iAkhawunti yam yeTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 434
Ngaba uyafuna ukubuyisa iakhawunti yeTelegram? Ngokusebenzisa inqaku elilandelayo ungafunda ukuba zeziphi iindlela ezahlukileyo zokunikezelwa kwesicelo ukuze sikwazi ukufumana iakhawunti esasicinga ukuba ilahlekile. Inyani yile yokuba ukuyenza kulula kakhulu kwaye kuyakhawuleza.
Yocingo na enye yezona zicelo zemiyalezo zithandwa kakhulu kwihlabathi, Kwaye abadali bayo bazamile ukubonelela ngamanqanaba aphezulu emfihlo kuye ngamnye wabasebenzisi. Xa uzama ukufumana iakhawunti kweli qonga ungafikelela kwezinye iindlela ezahlukeneyo. Apha sixelela ezona zibalulekileyo.
Phinda ufumane iakhawunti yeTelegram ngeSMS
Enye yeendlela ezilula kunye ezikhawulezayo ukuze ukwazi ukufumana iakhawunti yeTelegram kungumyalezo obhaliweyo. Kubalulekile ukuba neselfowni yethu kuba isicelo siya kusithumela ikhowudi yokuqinisekisa. Nantsi inyathelo ngenyathelo:
Ukufumana iakhawunti yeTelegram ngeSMS kufuneka Chaza ilizwe kunye nenombolo yefowuni obhalise ngayo kwiqonga.
Qiniseka ukuba ufake idatha ngokuchanekileyo. Ngoku kufuneka ucofe nje kwiqhosha "Elandelayo"
Kwimizuzwana embalwa uya kufumana ngeSMS ikhowudi yokhuseleko yemivo emi-5
Isicelo siya kukunika isithuba semizuzu emi-2 ukuze ukwazi ukufaka loo khowudi kwibhokisi ebonisiweyo.
Ilungile. Isicelo siya kuqinisekisa ngokuzenzekelayo isicelo, kwaye ukuba yonke into ichanekile, uya kuba nakho ukufaka iakhawunti yakho ngaphandle kwengxaki.
Sebenzisa ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini
Xa usenza iakhawunti yeTelegram kubaluleke kakhulu sebenzisa ukhetho "lweManyathelo Amabini", okusinika ukhuseleko olukhulu kunye nemfihlo. Ngale ndlela siza kuthintela abantu esingabaziyo ekubeni bafikelele kwiakhawunti yethu.
Ukwenza uQinisekiso lwaManyathelo amaBini kube lula kakhulu. Ayizukuthatha thuba lide yenze:
Intloko ukuya kukhetho lokumisela
Cofa ku "Ubumfihlo nokhuseleko"
Ngoku nqakraza ku “Ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini"
Isicelo siya kukucela ukuba setha iphasiwedi
Landela Isalathiso ngasinye
Ekugqibeleni uya kuthi fumana ikhowudi nge-imeyile. Kuya kufuneka singene kwaye yiyo.
Phinda ufumane iphasiwedi nge-imeyile
Isicelo seTelegram sinika iindlela ezininzi zokukhusela esinokuzisebenzisa xa sizama ukufumana iakhawunti elahlekileyo okanye ukuba silibele iphasiwedi. Enye yeendlela zokuyifumana kwakhona nge-imeyile.
Ukuba unokukhetha "Ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini”Unokufikelela kwi-akhawunti yakho yeTelegram nge-imeyile:
Kuya kufuneka wenze inkqubo efanayo wenze ntoni ukufikelela ngeSMS
Umahluko kukuba ngeli xesha Isicelo siya kusicela ngegama eligqithisiweyo ukuze ukwazi ukungena.
Unokukhetha ezimbiniUkuba uyalikhumbula igama lokugqithisa, kufuneka ulibeke ngaphakathi kwaye kunjalo, uya kuba nakho ukufikelela kwiakhawunti yakho, kodwa ukuba uyilibele, unokucofa ukhetho "Uyilibele iphasiwedi?
Uyakufumana ikhowudi nge-imeyile
Kufuneka nje ngenisa ikhowudi kunye ne-voila. Uya kuba nakho ukufaka iakhawunti yakho ngaphandle kwengxaki.
1 Phinda ufumane iakhawunti yeTelegram ngeSMS
2 Sebenzisa ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini
3 Phinda ufumane iphasiwedi nge-imeyile
Ungayicofa njani imiyalezo kumajelo eTelegram nakwingxoxo?